Ungayifaka kanjani i-League of Legends ku-Ubuntu / Debian (Indlela ye-2018) (Okuzenzakalelayo) | Kusuka kuLinux
Esikhathini esithile esedlule sishicilele umhlahlandlela omkhulu wokuthi kanjani faka i-League of Legends ku-Linux usebenzisa iwayini, i-Winetricks ne-PlayOnLinux, kuze kube manje leyo ndlela iyaqhubeka nokungisebenzela ngaphandle kwenkinga, kepha abasebenzisi abaningana babhale basitshela ukuthi ezimweni zabo indlela ayisebenzi ngendlela obekufanele isebenze ngayo, ngakho-ke kulokhu siletha indlela eqonde ngqo ne-othomathikhi ukuze ngingaFaka i-League of Legends ku-Ubuntu / Debian.
Le ndlela igxila ekusebenziseni iwayini ebelilungiselelwe ngaphambilini elisebenza kahle futhi elihambisana nokufakwa kwamaphakeji adingekayo ukuze ungabi nalo uhlobo lwenkinga.
Ungayifaka kanjani i-League of Legends ku-Ubuntu / Debian?
Izinyathelo faka i-League of Legends ku-Ubuntu / Debian Ngale ndlela zilula impela, vele ulande ifayela eliqukethe umdlalo nesibonelo sewayini elilungiselelwe kusuka lapha, leli fayela lithatha cishe i-9.3 GB yesikhala sediski, uma selilandiwe siyaqhubeka ukulifaka ngokwenza ukufakwa okufanelekile .sh kwe-distro yakho.
Abasebenzisi be-Ubuntu bangalanda isifaki kusuka ku- lapha nalabo bakaDebian kusuka kulokhu okunye isixhumanisiKuwo womabili amacala, kulula ukunikeza izimvume zokwenza futhi usebenzise i- .sh, okufanele uqale ufake kuyo iphasiwedi yakho yezimpande ukwengeza amakhosombe afanele bese wamukela amaphakheji adingekayo, ngaphezu kokwenza umkhombandlela we-GAMES lapho uzothanda khona sebenzisa i-LOL.
Lapho iskripthi sesiqedile ukwenza yonke imikhuba yaso, izokwakha ngokuzenzakalela ukufinyelela okuqondile kwe-LOL kusuka kudeskithophu yethu ukuze sikwazi ukuqala ukujabulela lo mdlalo omuhle.
Ividiyo yangempela lapho sifunde ukufaka i-LOL ngale ndlela ethile ishiywe ngezansi:
Ukuqedela ithiphu ethakazelisa kakhulu, labo abanezinkinga zokukhombisa izinhlamvu lapho bengena emdlalweni bangazilungisa ngokuphoqa i-lol ukuthi isebenzise i-directx, ukwenza lokhu kuguqule ifayili lokumisa elingatholakala ku GAMES/LOL/LoL32/drive_c/Riot Games/League of Legends/Config/game.cfg ukulungisa umugqa x3d_platform=1 por x3d_platform=0, siyonga futhi sijabulele.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ungayifaka kanjani i-League of Legends ku-Ubuntu / Debian (2018 Method) (Okuzenzakalelayo)
Bekufanele ngabe uyilayishe njengesifufula 🙂
Iqiniso! Ngiyabonga ngokuyilayisha nangesifundo, kepha angikwazanga ukuyilanda futhi manje ithi inani eliphakeme lokulandwayo kuDropbox selidlulwe ngokweqile ...
Ayikwazi ukulanda kusuka ku-Dropbox ngenxa yomkhawulo wokulanda ...
Ngabe kufanele ngabe balayishe amafayela ku-Crapbox? : S
Uyacelwa ukuthi uphinde uyilayishe kwenye ipulatifomu ..
ifayela alikwazi ukulandwa
Ngizozama ukuyivuselela ngokuyilayisha kwenye indawo ...
Shiya isixhumanisi esisha pleaseeee !!!!
UNicolas gonzalez kusho
umnikelo omuhle! Kungakuhle ukuvuselela ifayili sicela
Phendula uNicolas Gonzalez
Isifaki uyithathephi? e-pirate bay uma ufuna i-flatpak kunezifaki ezenzakalelayo zemidlalo newayini
Ngikufakile lokho kodwa iqiniso liwukuthi, sikala i-fps futhi ngine-GTX 1060
ifayela alikwazi ukulandwa ngakho alinalusizo
Okumnyama: Ithuluzi Lokuhamba Ngezithombe